Codsi Cashuur Casri ah oo laga qaaday Garoonka Diyaaradaha Magaalada Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulCodsi Cashuur-qaadis ah oo Casriga Istaanbuul ee Istanbul ayaa Bilaabmay
17 / 02 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Codsi tagsi oo casriyeysan ayaa lagu bilaabay garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Ersoy: “Waxaan sidoo kale lahadli doonnaa qolalka kale ee taksiyada. Haddii ay suurtagal tahay, waxaan si ikhtiyaar ah u codsan doonnaa in dhammaan ganacsiyada taksiga lagu wareejiyo sharciga haddii loo baahdo. Waa nidaam xal u helay cabashadii badnaa ee ka soo yeertay dadka tagaasida isla markaana keenay is-xakameyn iyo is qancin illaa maanta. ”
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy wuxuu xusey in u guuritaanka dalabka taksiyada smart, kaas oo xal uhelaya cabashooyinka ku saabsan taksiyada wuxuuna siinayaa xakameyn iyo qanac, wuxuu xaqiijin doonaa kala guurka dhammaan shirkadaha tagaasida.
Kulankii lagu qabtay Xarunta Adeegyada Taksiga ee Duulista Istaanbuul, “Entaxy” halkaas oo rakaabka diyaaradaha ay soo wici karaan oo ay boos ka sameysan karaan xarunta wicitaanka iyo dalabka moobiilka.
Wasiirka Ersoy, kormeeraha milkiilaha Gagida Diyaaradaha ee Istanbul İsmail Şanlı, Madaxa Hawlaha Guud ee Hawlaha Madaarka iyo Maareeyaha Guud Kadri Samsunlu, Maamulaha Xarunta Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Istanbul Coşkun Yılmaz, Madaxa Taksiileyaasha Taksiyada Diyaaradaha ee Istanbul Fahrettin Can iyo darawallo taksi oo badan ayaa ka soo qeyb galay kulanka.
Wasiirka Ersoy wuxuu caddeeyey in Madaarka Istanbul uu yahay maalgashi ku dayasho mudan adduunka marka la eego dalxiiska iyo duulista hawada oo uu sheegay inay noqon doonto maalgashi ay ku daydaan maal-gashadayaasha kale ee mustaqbalkaba leh codsiyadooda iyo adeegyadooda.
Isagoo carrabka ku adkeeyay in adeegga taksiga ee caqliga leh uu yahay mid ka mid ah codsiyada casriga ah ee adduunka, ayuu Wasiir Ersoy yiri, “Waxaan sidoo kale la hadli doonnaa qolalka kale ee taksiga. Haddii ay suurtagal tahay, waxaan si ikhtiyaar ah u codsan doonnaa in dhammaan ganacsiyada taksiga lagu wareejiyo sharciga haddii loo baahdo. Waa nidaam xal u helay cabashooyinka badan ee ka imanaya tagaasida ilaa hada, waxayna keenaysaa xakameyn iyo qanacsanaan. ayuu hadlay.
Isagoo carrabka ku adkeeyay in tababarka dalxiiska ee loo bilaabay darawallada taksiyada ka shaqeeya garoomada diyaaradaha ee Istanbul uu sidoo kale bilaabay in la siiyo dadka tagaasida ah ee ka shaqeeya madaarada, Wasiirka Ersoy wuxuu xusey inay qorsheynayaan inay tababar gaar ah siiyaan mas'uuliyiinta shacabka ee ka shaqeeya madaarada.
Wasiir Ersoy, wuxuu dib u eegay bartilmaameedka 2023, isagoo sharraxay inay isbadal guud ku sameeyeen siyaasada dalxiiska, wuxuu yiri:
“Maxaan nidhaahnay? Waxaan hada bartilmaamedsan doonnaa dalxiisayaal aqoon leh. Waa muhiim in la kordhiyo oo keliya tirada dalxiisayaasha, laakiin sidoo kale tirada dalxiisayaasha aqoonta u leh. Dabcan, waxa ugu muhiimsan halkan waa in la daboolo baahiyaha dalxiiska. Markasta oo aad baahiyahooda wax ka qabato, dakhli badan ayaa ka hela iyaga. Waxaan higsaneynaa inaan tababarno ku dhawaad ​​kalabar 18 darawallada tagaasida ah ee Istanbul sannadkan. Waxaan si adag ugu bilownay tan waxaanan ku bilownay codsigi ugu horreeyay ee garoonka diyaaradaha Istanbul. Wuxuu sii waday Sabiha Gökçen wuxuuna ku guda jiraa marxaladiisii ​​saddexaad ee Jasiiradda taariikhiga ah iyo Şişli. ”
Dhibaatada Taksi Burcad Badeedda
Isaga oo qiimeynaya arrinta qaadista taxaddarrada darawallada burcad-badeednimada, ayuu Wasiir Ersoy sheegay in arrintan looga gudbi karo maalgashiga darawallada tagaasida.
Isagoo carrabka ku adkeeyay inay darawallada tagaasida ku maalgashadaan gawaaridooda, Wasiir Ersoy wuxuu sii waday sida soo socota:
“Meelaha aad halkan ku leedahay waa taksi. Markii aad timid, waxaad soo qaadatay taksiyo madow oo buluug ah oo aan aragnay. Markasta oo aad kordhiso tirada kuwan… Waxaan kaliya oo natiijooyinka ka dib ka heli doonnaa xeerarka sharciga. Haddii kale, haddii aadan ka soo bixi karin waxyaabaha aad ka fileyso, nasiib darro, waxaad la kulantaa howlo aan rasmi ahayn iyo sidoo kale codsiyo dhulka hoostiisa ah oo qayb walba leh. Waa marka ugu horreysa oo dhan inaad horumariso habka ugu dhakhsaha badan uguna saxsan ee leh codsiyada. Dhameystirka iyo hagaajinta cilladaha kaa muuqda ee lagu arko… Markii sida saxda ah ee saadka loo buuxiyo baahida, ayaa sida ugufiican aan u heli doonnaa. ”
Waxaa jira Kuwa Iskudaya inay Iibiyaan Nidaamkan Dibedda
Isagoo carabka ku adkeeyay in Istanbul ay tahay magaalo soo jiidata dalxiisayaasha sida ay u badan yihiin dadkeeda, İsmail ıanlı, Kormeeraha Hantidhacda Istaanbuul ee Istanbul, ayaa sheegay in dhaqannada la hirgaliyay ay tahay inay noqdaan kuwo saaxiibtinimo u leh dalxiis.
Şanlı wuxuu caddeeyey inay awood weyn ku leeyihiin dalxiiska oo wuxuu yiri, "Dhaqankeenna, taariikhdeena, calool-kaygayaga, jikadaheena… waxay u soo baxday inay tahay astaamaha sare ee dalxiiska." ayuu yiri.
HDI Airport Hawl ee Sarkaalka Fulinta iyo Maareeyaha Guud Kadri Samsunlu albaab dunida, Garoonka Istanbul Turkey ee fikirka adeeg milmay la technology oo sheegaya in ay ugu dadaalnay inaannu si ay u bixiyaan rakaab ah ay, link ugu dambeeya ee fikrad this waxaa la muujiyay in ay codsiga taxi smart sii.
Isagoo cadeeyay inay muhiimad siinayaan rakaabka rakaabka sida madaarka Istanbul, Samsunlu wuxuu sii waday ereyadiisa sida soo socota.
“Waxaan u aaday Mareykanka labo usbuuc ka hor, taksiga aan qaato xitaa kama ag dhowaado tagaasida aan halkan ku aragno. Xitaa tani waxay muujineysaa inaan shaqadeena ku qabno tayo aad u sarreysa, waxaan isbeddel ugu sameynnaa adduunka. Waxaan u adeegnay in kabadan 56 milyan oo rakaab ah waxaanan ku dhejineynaa ahmiyad weyn si aan rakaabkeena uga dhigno mid faraxsan. Waxaan u aragnay adeegga taksiga caqliga leh inuu yahay guul muhiim ah. oo dhan Tani waxay ka imanaysaa Istanbul Airport Turkey milan xitaa aad rabto in aad dunida ku faafinaya. Waxaan maqalnay in adeegani isku dayayo in loo qaado dibada. Maddaarka Istanbul, codsi ay rakaabkeenu ku sameyn karaan boos celin waxay wici karaan tagsi iyada oo loo sii marayo xarunta wicitaanka iyo dalabka moobiilka. Nidaamka lagula socon karo lana socon karo 7/24, tayada adeeggu wuxuu gaari doonaa halbeeg dhab ah. ”
Rakaabyada soo dejisan doona dalabka waxay awoodi doonaan inay taksi u wacaan halka ay u socdaan ama meel kale oo hal riix ah. Tagaasida madhan waxaa loo gudbin doonaa macaamiisha wicitaanada ka imanaya dalabka. Markaa, rakaabka waxaa la siin doonaa marin tagaasida dhaqsaha leh. Sidan, tirada gawaarida ku dhex socda taraafikada ayaa la yareyn doonaa iyada oo ujeeddada laga leeyahay raadinta rakaabka.
Intaa waxaa u dheer, dalxiisayaasha iyo rakaabka waxaa lagu ogeysiinayaa afkooda hooyo iyada oo loo marayo shaashadaha tagaasida. Nidaamka laga hirgaliyay iszmir iyo tagaasida taxstanbul Airport waxaa loo qorsheeyay in laga hirgaliyo Ankara iyo Gaziantep.
Arjiga Codsiyada Maqalka ah wuxuu ka bilowday Afyonkarahisar
Qandaraaska wadajirka ah ee wadada u dhexeeya Aselsan iyo KGM
Turktraktör, Beeralayda leh Codsiga Cusub ee Cilmiga Beeraha 'Tarlam Cepte'
Qiimaha Taxanaha Cimilada ee Istanbul ayaa lagu dhawaaqay
Codsiga Cashuur-dhaafka Casriga ah ee Madaarka Istanbul
Codsi Taksi Smart ah
Taksi Burcad Badeed
Konya Metropolitan waxay qaadday Talaabooyin cusub oo Gaadiidka